नेइमारको ब्राजिल पनि विश्वकपबाट बाहिरियो, बेल्जियम ३२ वर्षपछि अन्तिम ४ मा ! – Everest Dainik – News from Nepal
नेइमारको ब्राजिल पनि विश्वकपबाट बाहिरियो, बेल्जियम ३२ वर्षपछि अन्तिम ४ मा !
रजान । रुसमा भइरहेको विश्वकप फुटबल अन्तर्गत क्वाटर फाइनलको दोस्रो खेलमा पाँच पटकको विश्वकप विजेता ब्राजिल बेल्जियमसँग २-१ ले पराजित भएको छ । यो हारसँगै छैठौं पटक विश्वकप जित्ने ब्राजिलको सपना समाप्त भएको छ । बेल्जियम ब्राजिललाई पाखा लगाउँदै ३२ वर्षपश्चात सेमीफाइनलमा प्रवेश गरेको हो ।
अब बेल्जियम फाइनल प्रवेशका लागि आगामी मंगलबार फ्रान्सँग प्रतिस्पर्धा गर्ने छ । नेपाली समयअनुसार राती पौने १२ बजे भएको खेलमा बेल्जियमका केविन डी ब्रुइनको कर्नर किकमा ब्राजिलका फर्नाडिनियो फ्रेडने आत्मघाती गोल गरेका थिए । यसपछि डी ब्रुइनले खेलको ३१ मिनेटमा दोस्रो गोल गरे । यस्तै, ब्राजिलका रेनातो अगुस्तोले आफ्नो टिमका लागि ७३ औं मिनेटमा एक गोल फर्काए ।
विश्वकपको इतिहासमा यस्तो पुनरागमन गरेर खेल जित्ने बेल्जियम पछिल्लो ४८ वर्षमा पहिलो टिम हो । ब्राजिलले भने पछिल्ला २५ खेलको अपराजित यात्रा टुंग्याएको छ । बेल्जियम मार्टिनेजको प्रशिक्षणमा पछिल्ला २४ खेलमा अपराजित रहेको छ ।
ब्राजिल र बेल्जियमबिच अहिलेसम्म चार पटक भेट भएको छ । सन् १९६३ मा भएको पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा बेल्जियम ५-१ ले विजयी भएको थियो । तर त्यसपछिका तीन खेलमा ब्राजिल विजयी भएको छ । विश्वकपमा भने यो दोस्रो भेट हो । बेल्जियमले ५५ वर्षपछि ब्राजिलविरुद्ध जीत दर्ता गरेको हो ।
सन् २००२ को विश्वकप फुटबलको अन्तिम १६ मा ब्राजिलले बेल्जियमलाई २-० ले हराएको थियो । त्यो खेलमा दोस्रो हाफमा रिभाल्डो र रोनाल्डोले गोल गरेर जित दिलाएका थिए ।ब्राजिल लगातार सातौँपटक विश्वकपको क्वाटरफाइनलमा पुगेको हो ।
यसअघि दुईपटक मात्रै यो चरणमा पराजित भएको छ । सन् २००६ र २०१० मा ब्राजिल क्वाटरफाइनलबाट बाहिरिएको थियो । २०१४ मा जर्मनीसँग ७-१ को लजास्पद हार ब्यहोरेको ब्राजिल यस पटक भने क्वाटरफाइनल बाटै बाहिरियो ।
ट्याग्स: belgium, Brazil, Fifa world cup 2018, Neymar